China hair style ibrashi hair style mveliso kunye nabenzi | Yongsheng
Imveliso yangaphambili ------isampulu------ isiqinisekiso-Izinto------ ukuthenga-Icandelo ------Inxalenye------ Umgangatho wenaliti------ uhlolo-Icandelo ------Inxalenye ------umphezulu------ Umgangatho wokugqiba ------uhlolo-lweNdibano-Umgangatho ------ukupakisha-uhlolo.
Sineebrashi zeenwele ezithandwayo kunye nefashoni.
Unokukhetha kwientyatyambo eziMibalabala UV ugesi ombane ugqiba iinwele, inaliti enombala yeklasikhi yeenwele kunye nenayiloni bristles, Umbala irabha yokutyabeka ibrashi emanzi enemingxunya kumqamelo, Imibala ibrashi emanzi ngerabha yokugquma, Intyatyambo yegradient ye-UV yombane yokugqiba ibhulashi yeenwele, Inaliti yeklasikhi Ibhulashi yeenwele ezikhuselayo, ibrashi yokuhlekisa eneebristles kunye nenayiloni edibeneyo
Kwaye sinemathiriyeli entsha silindele iplastiki, ngomthi kunye noqalo. Zizinto ezidityanisiweyo zeBiomass. Luhlobo olutsha lwezinto ezinganyangekiyo ezenziwe ngezinto ze-macromolecular kunye ne-biomass. Kuba umxholo wemathiriyeli entsha yokusingqongileyo ingaphezulu kwe-50%, imveliso inezinto ezilungileyo zokhuselo lokusingqongileyo kunye nekhabhoni ephantsi. Kwaye sinefayibha yoqalo kunye neendiza ezikhoyo.
Ibrashi yokuhlekisa inokuphucula ulawulo lwesitayile ngokudityaniswa kweebhokhwe kunye nenayiloni. Umsila womsila ubambe isiphelo sokukhetha ukwahlula, ukwahlula kunye nokuchukumisa kokugqibela. Iibhulukhwe ezimfutshane ze-boarles ukudala uxinzelelo kunye nokuqaqamba kunye ne-tourmaline eyonyusileyo i-nylon bristles ngokulula ihamba ngeenwele. Iibhokhwe ezinamabhrashi okucoca kunye neemeko zeenwele kunye nokusasaza ioyile yendalo yeenwele ngaphezulu kweshafti.
Ibrashi emanzi yeenwele zentsimbi zenziwe ngezinto ezichasayo, izikhonkwane ezithambileyo zizisa ukomelela okuphezulu kunye nokuqina. Izisombululo ogqibeleleyo iinwele jiko, iingxaki electrostatic kwaye kulula ukuyicoca.
Egqithileyo Umthi kunye nebrashi yeenwele zoqalo
Okulandelayo: Iibrashi ezincinci zeenwele ezinemigca yerabha enemibala, ugesi we-UV, ukuhanjiswa kwamanzi
Iibhrashi zeNwele zoBambo eziQhelekileyo
Bhala iBrashi yeenwele
Iibhodi zeenwele zeOem Bamboo
Iingcali zeBlue Wooden Brush
Ukuthambisa iinwele ngebrashi
I-Wooden Paddle Hair Brush